CORONAVIRUS NA 2019-nCoV : Mahatratra hatramin’ny 30 000 ny olona efa nifindrany
Tao anatin’ny roa volana monja dia tafakatra 565 ny isan’ny olona matin’ny tsimok’aretina « coronavirus », ary mahatratra hatramin’ny 30 000 ny olona nifindrany maneran-tany. 7 février 2020
Fantatra amin’izao ihany koa fa mifindra amin’ny zaza ao am-bohoka ilay tsimok’aretina, satria ny 2 Febroary lasa teo dia nisy zaza teraka tany Sina no voalaza fa mitondra ilay 2019-nCoV, antsoina hoe « coronavirus ». Miparitaka haingana be ity tsimok’aretina ity koa indreto misy toromarika vitsivitsy momba ity areti-mandoza ity.
Raha araka ny fantatra dia ny fihinanana ramanavy no nahatonga an’ilay valan’aretina Coronavirus, tany amin’ny tanànan’i Wuhan tany Sina. Mifindra amin’ny alalan’ny piti-drora sy ny dikin’ny olona na biby mitondra ny tsimok’aretina izy io. Tsy fantatra eo no ho eo ny olona mitondra ny tsimok’aretina fa miotrika ao anaty,mandritra ny 2 hatramin’ny 14 andro izay vao hita soritra amin’ny tsy fahasalamany ilay marary mitondra ny 2019-nCoV (Coronavirus)
Ireto ny trangan’aretina ahafantarana ny olona voan’ny 2019-nCoV (coronavirus)
Voan’ny tazo ilay olona
Reraka (hita amin’ny maso)
Mangatsiaka, tsy vonto-kafanana
Marary ovana (torovandrovana)
Sempotsepotra(tsy mahazo aina)
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (128) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (91) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (84) 22 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (74) 26 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (71) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (66) 22 mai 2020